Xusuusaha idin faraxsan oo had iyo jeer aad siiso raaxo. Qof walba ayaa doonaya inuu ku soo shirtagi ay soo bidhaamaysa qaali daqiiqad. In ninkan Zaman horey waa nasiib inuu naftiisa badbaadiyo in sawiro iyo videos. In VHS ee la soo dhaafay camera waxaa loo isticmaalay in uu kaydiyo video ah oo cajalad ku duuban VHS ah. Marka warbaahinta digital bartaan, VCR iyo cajaladaha VHS ayaa bedelay CD, DVD iyo Blue Ray. Ilaalinta in cajaladaha VHS loo baahan yahay wax badan oo meel iyo daryeelka. Sidaas xalka ugu fiican uu si loogu badalo cajaladaha VHS aad warbaahinta digital galay.
Ma rabtaa in aad loogu badalo aad Video VHS jecel yahay, oo filimada in qaab MP4? Xalku waa had iyo jeer laga heli karaa! Waxaad badalo kartaa VHS videos in videos MP4 oo iyaga ka bedel ku Mac ama Windows ama xitaa mararka qaar iyaga ka dib ku gubtaa, in DVD ah. Laba qaybood oo ay ku lug leeyihiin in habkan; aad u bedeli karaan video VHS ay u DVD iyo ka dib badalo qaab DVD ah qaab MP4 ah. Waxaa laga yaabaa in aad isku dayday laga yaabaa in Handbreak ama Factory ku Qaabka smart laakiin videos ee aan aadiyo heerarka aad. Si loo xaliyo dhibaatadaada, qodobkan oo kaliya talinaysaa a video Converter weyn in la hubiyo tayada aad video aan laga badiyay iyo sidoo kale sugidda xawaare ka dhakhso badan.
Qeybta 1: U beddelaan qaab VHS ah qaab DVD on Mac iyo Windows
Qeybta 2: Isticmaal Wondershare Video Converter Ultimate ah si loogu badalo DVD in MP4 on Windows iyo Mac OS X
Habka ugu fudud si loogu badalo video VHS ah in qaab DVD digital ah waa iyada oo la isticmaalayo ee ciyaaryahan VHS albab + DVD in ay u badan tahay uu leeyahay ereyga "Combo" ee horyaalka. Waxaa jira noocyo kala duwan oo ka mid ah shirkadaha soo saarta kuwaas qalabka sida Philips, Toshiba, Samsung, Sony iyo Panasonic ka mid ah dad badan oo dheeraad ah.
Mashiinka ugu fiican ee DVD ah hagaajinta tayada xumo image soo jireenka ah leh VHS u gudbin doonaa cajalad VHS ah. Khasaare kaliya ee la sameeyaa waa u mashiinada waa in Badankood wax u qoraan isticmaalaya DivX ama MPEG-2 halkii MP4 ah.
Si loo hagaajiyo on this, waxaad isticmaali kartaa PC ah si ay u transcode. Kale ayaa, fudud, waa in furaysto ciyaaryahan VHS soo galeen DVD ku duuban. Maaddaama ay xaqiiqda ah mashiinada ugu casrisan socoto oo dhan-digital, waxaad u baahan doontaa mid ka mid ah aqbala ah video aqbasho analog. Mashiinada waxay ku helay godka SCART'ga ah oo cable ah SCART'ga 21-pin ee ku xiran. SCART'ga awood u tiro ka mid ah video in aad la cable diinta SCART'ga u maarayn karaan. Tan iyo tayada image ma aha arin la cajaladaha VHS, koobin sida fudayd in la isticmaalo, qiimaha-tag, oo tayo leh, iyo isku halaynta sameeyo arrimaha asaasiga ah si ay u eegaan markii xulashada software ah. Si aad u badalo VHS inay qaab DVD, talaabooyinka soo socda waa in la raaco:
Connect video ciyaaryahan VHS in ay PC isticmaalaya cable ee ku haboon ama fiilooyinka la siiyey software oo aad doorato. Waxaad u baahan kartaa cable gaarka ah SCART'ga in uu leeyahay xadhko ah casaan iyo caddaan iyo huruud ah. Your ciyaaryahan sidoo kale ay ka imaan karaan iyada oo wax soo saar, kuwaas oo. Haddii ay dhacdo in aad ciyaaryahan sida wax soo saarka Jaha ku yaal, ma isticmaali doonaan fiilooyinka hore-dhajinta cad, casaanka iyo jaalaha ah sida, kuwaas oo had iyo jeer waa la geliyey, oo aan wax soo saar.
Bilow software duubo aad kombuutarka markaas ciyaari cajalad VHS ka meesha aad rabto lagu qoro si initialize ah. Digitalizing cajaladaha VHS in habkan waa farsamo sahlan.
Jooji software duubo aad la joojiyo oo video ah oo markaas la joojiyo video laftiisa.
Haddii aad gubasho aad video inay DVD ah, software duubo waa in ay awood u ikhtiyaar ah, waayo, taasu. Haddii aan, waxaad isticmaali kartaa DVD gaare Windows ee arrintan. Haddii Kan sameeyey DVD uusan taageeraya qaab file video, utilities Converter kale sida gacan-jabis wuxuu noqon karaa mid ka mid ah muhiimadda aad u badan.
Gali DVD faaruq DVD qoraa kombiyuutarka soo dhex galay. Waxaa jira in yar oo gubanaya aad file in Blu-Ray tan iyo tayada liidata ka dhigi doonaa sidii qashinka lacag. DVD yihiin wax badan ka jaban marka loo eego VHS iyo in la hubiyo tayada video ah.
Habka ugu danbeysay ee diinta VHS inay MP4 ku lug diinta qaab DVD ee qaybta 1 in qaab MP4. Tobaneeyo sanno ka hor, isagoo ururinta weyn ee DVD ahaa arin ay ku faanaan. Marka taa ururinta Seinfeld, Fiction saxarka ah, iyo ku biiritaankiisa Star Wars ka dhigay qof caan ah oo ka mid ah saaxiibada ay. Maalmahan, tani ma aha kiiska; qof kastaa uu rabo kasta filim ama TV show in ay Faraha ku saabsan qalab kasta oo elektaroonik ah oo ay ku leeyihiin. Shelefyada chock full of videos hadda waa halkii eheeyn laakiin ay yihiin wasaq aan loo baahneyn ee bannaan. On top of in, waxaan nahay gaar ah sida uu tareenku ka noqon doonin mid caajis aan helaan ilo xooggan ee madadaalada.
Waxaa jira siyaabo dhowr ah si loogu badalo DVDs in qaabab in la jaanqaadaan kala duwan ee qalabka. Ujeedada noocan oo kale ah, qaab MP4 ah wax badan ka doorteen. Iyadoo taas maskaxda, waxay leedahay Hanuuniye ku saabsan sida loo badalo DVD files galay MP4s isticmaalayo Windows ama X. OS Mac ah waxaa muhiim ah in la fahmo in tarmo qalabka xuquuqdiisa waa amerceable, sidaas waa inaad xusuusataa ah in ama aan video aad waa dooxeen la ilaaliyo. Halkan hago dhaco:
Download iyo rakibi Wondershare Video Converter Ultimate ah. Booqo bogga Wondershare Video Converter Ultimate ugu weyn, guji "Download Now" cagaaran button. Fur rakibayo ka dibna aad raacdo xeerasha / tilmaamaha ku-shaashadda. Intaa ka dib, aan bilowno app mar rakibay.
Ku dar DVD ah. Ka dib markaad furto, riix "DAR DVD" doorasho adigoo riixaya "+ dar DVD". Dooro DVD ee aad u baahan tahay si loogu badalo in ay qaab MP4 meesha uu ku yaallo.
Dooro hadiyad iyo badalo. Marka file-ka dooqaaga ah la doorto, diyaariyeen ah ee "hadiyado" customizable muuqan doonaa underside ee suuqa kala codsiga. Samee click ku menu dropdown in ay xaq u ah "loogu badalo in ay", ka dibna dooro (* .mp4) ka mid ah liiska of qaabab fara badan. Riix badhanka caleenta ee ugu hooseysa, doortaan tayada doonayo ee video ka menu dropdown ah. Guji ka ellipses buluug ah si ay u doortaan meesha laga reebo video ah la gediyay. Haddii aad rabto in aad wax la mid ah heerka jir ama heerka yara bedesho, riix calaamada Intaa waxaa dheer oo doog ah underside tayada video ah. Marka aad dhamaysid, riix badhanka diinta ah.
Haddii aad rabto in aad ka format VHS qaab MP4 heli video tayo wanaagsan leh si degdeg ah xawaaraha diinta, nidaamka wada hadleen kor ku sameeyo isku halayn karo video ama diinta movie qalab aad u. Isku day inaad iyaga maanta iyo adna aad jeclaan doonaa. Shaqaaleeyaan habka labada qaybood ah oo wuxuu ku raaxaysan aad videos MP4 la jecel yahay ama filimada on qalab aad.
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan VHS inay MP4 on Mac iyo Windows